Waxaan kuu soo bandhigeynaa buuggeena barashada Jarmalka, kaas oo aan u diyaarinay kuwa doonaya inay keligood bartaan Jarmalka, kuwa aan ku hadlin wax Jarmal ah, iyo kuwa hadda bilaabaya barashada Jarmalka. Waxaad si fudud ugu isticmaali kartaa buugaagtayada jarmalka, oo aan u diyaarinay E-Book, kumbuyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta.
Buuggeena Jarmalku waa labadaba buug dheeri ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga sare iyo buug waxbarasho oo Jarmal ah oo loogu talagalay dadka bilowga ah si ay u bartaan Jarmalka.
Buuggeena barashada Jarmalka, oo aan ku daabacnay magaca Wir lernen Deutsch (WLD), ayaa lagu heli karaa iibinta Suuqa Google Play.
Buuggeena jarmalka, muxaadarooyinka turkiga oo caan ah oo la qadariyo ayaa loo isticmaalay. Markaad aqrinaysid buuggeena, waxaad dareemi doontaa inuu jiro macalin hortaada jooga. Buuggeenna barashada Jarmalka ayaa lagu taageeray muuqaallo iyo tusaalooyin ku filan.
Buuggeenna Jarmalka ee la yiraahdo Wir lernen Deutsch (WLD) waxaa isticmaali kara kuwa doonaya inay iskood u bartaan Jarmalka, waxaana loo isticmaali karaa buugga dheeriga ah ee Jarmalka ee ardayda fasalka 9aad, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa buuga Jarmalka ee ardayda fasalka 10aad maadaama ay ku jiraan maadooyinka fasalka 10aad. Xitaa waxaa loo isticmaali karaa inay tahay il waxtar badan oo wax ku ool ah oo loogu talagalay ardayda fasalada 11 iyo 12 ee asal ahaan Jarmal liita.
RIIX HALKAAN SI AAD U AKHRISO FAALO KU SAABSAN BUUGEENA
Kuwa aan dhigan dugsi kasta ama koorso kasta oo Jarmal ah waxay si fudud u isticmaali karaan buuggeena barashada Jarmalka si ay iskood ugu bartaan Jarmalka. Buuggeenna waxaa lagu diyaariyey dad aan ku hadlin wax af Jarmal ah iyo casharrada Jarmalku ka soo bilaabaan meel hoose. Marka, kuwa ku cusub barashada Jarmalka ama kuwa aan aqoonin Jarmal kasta waxay awood u yeelan doonaan inay si fudud Jarmal uga bartaan buuggeena.
Si ka duwan buugaagta kale ee suuqa yaalla, buuggeenna midabada iyo muuqaalka leh ayaa ahmiyad weyn siisay muuqaallada. Buuggeenna waxaa loo diyaariyey iyadoo la tixgelinayo kuwa aan ku hadlin wax Jarmal ah, taas oo ah, kuwa ka soo bilaabaya xoq, iyo muxaadarooyinkeenna waxaa loo diyaariyey si aad u faahfaahsan, cad oo la fahmi karo, iyadoo la tixgelinayo kuwa qaatay casharrada Jarmalka markii ugu horreysay.
NUXURKA BUUGGA IS-IS-GARDHIRKA
# NUXURKA BUUGGA IS-IS-GARDHIRKA
Tags: buugga koorsada ee german, buugga waxbarashada ee german, buug loogu talagalay barashada Jarmalka, is-barashada buugga jarmalka